Xildhibaan Mahad Salaad "96 Xildhibaan ayaa Saxiixday Mooshinka Ka Dhanka ah Madaxweyne Farmaajo".
Thursday December 21, 2017 - 11:04:52 in Wararka by Super Admin
Saacadon kadib markii uu xuriyaddiisa dib u helay Mid kamida siyaasiyiinta ugu cad cad mucaaradka dowladda Farmaajo ayay xildhibaanno katirsan DF-ka waxay ku dhawaaqeen in ay saxiixeen mooshin cusub oo ka dhan ah xukuumadda Kheyre.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah Golaha shacabka Soomaaliya ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin xilka qaadista Madaxweyne Farmaajo,waxaana uu xusay in hadda ay heystaan Xildhibaano ku filan mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha.
Warbixin dheer oo wakaaladda wararka Reuters ay ka qortay xiisadaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee kajira magaalada Muqdisho ayay ku sheegtay in xaafado katirsan magaalada ay isku aruursadeed maleeshiyo beeleedyo kasoo horjeeda dowladda Farmaajo islamarkaana ay jiraan caadifado qabiil oo ku baaqaya in larido dowladda hadda jirta.
Reuters waxay soo hadal qaaday carada ka dhalatay Xasuuqii ciidamada Mareykanka ay ka geysteen deegaanka Bariire kadibna ay salaadiin katirsan beesha Habar gididr at warbaahintu si kulul uga hadleen iyagoo eedeynayay dowladda Federaalka oo mar sheegatay mas'uuliyadda xasuuqii deegaanka Bariire loogu geystay dad shacab ah oo badankood kasoo jeeday beesha Habar Gidir.
Halkan ka akhri warbixinta wakaaladda Reuters
Isha Warka:SomaliMeMo,Radio Mustaqbal